Title: Record of ENC 5th Conference 2008 (ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ညီလာခံမှတ်တမ်း)
Description/subject: "ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ညီလာခံမှတ်တမ်း" ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်ညီလာခံ၏အစီအစဉ်။ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသောကိုယ်စားလှယ်များ။ညီလာခံအဖွင့်မိန့်ခွန်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ။ လုပ်ငန်းကော်မတီ၀င်များ၏အစီရင်ခံစာများ။ ။ (၁)နိုင်ငံတကာရေးရာကော်မတီ (၂)ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံရေးရာကော်မတီ (၃)မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးကော်မတီ (၄)စီးပွားရေးနှင့်စီမံကိန်းရေးရာကော်မတီ (၅)စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးကော်မတီ (၆)ဒီမိုကရေစီနည်းကျဦးဆောင်မှုအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ၏အစီရင်ခံစာ။ ပြည်နယ်ကောင်စီများနှင့်State Coordinating Body များမှလက်ရှိနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းများ။ ။ (၁)ကချင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (၂)ကရင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (၃)ကရင်နီပြည်နယ် ပြည်နယ်ညှိနှိုင်း ဆောင် ရွက်ရေးအဖွဲ့ (၄)ချင်းအမျိုးသားကောင်စီ (၅)မွန်ပြည်နယ် ပြည်နယ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (၆)ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ။ ၂၀၀၆-၀၈ ခုနှစ်အတွင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ။ ပဉ္စမအကြိမ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံမှအတည်ပြု ထားသောရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်း တွင်ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသော ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်ကော်မတီဝင်များ။ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များသို့ ပေးပို့သည့်စာများ။ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ။
Description/subject: "PEACEFUL CO-EXISTENCE: Towards Federal Union of Burma [ Series No.12 ]" PART ONE:Policy Papers... 1. ENC Policy Statement 2. The New Panglong Initiative:Rebuilding the Union of Burma 3. The Road Map for Rebuilding the Union of Burma 4. Our future in the 21st Century 5. ENC Policy Statement on Humanitarian Aid..... PART TWO:ENC Statements and Letters... 1. ENC Open Letter to Gen. Than Shwe 2. ENC Open Letter to Kofi Annan 3. ENC Open Letter to Kofi Annan 4. Statements..... PART THREE(Burmese section):၁။ ဥက္ကဌ စောဘသင်စိန်.မိန်ဏခွန်း... ၂။စတုတဦအကြိမ်မြောက်ညီလာခံသို့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ...၃။ စတုတဦအကြိမ်မြောက်ညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်များ...၄။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ များကို သုံးသပ်သည့်စာတမ်း... ၅။မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းသော အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ..... PART FOUR:၁။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
Language: English/ မြန်မာဘာသာ
Description/subject: ENC "PEACEFUL CO-EXISTENCE: Towards Federal Union of Burma [Series No.9]" "၁၉၆၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းအသံလွှင့်ရုံခန်းမတွင် ကျင်းပသော ပြည်နယ်များညီဍွတ်ရေးအဖွဲဏမှ တင်သွင်းသည့် ဦပြည်ထောင်စုစစ်စစ် မူဦ နှင့် ပတ်သက်သည့်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ၁၉၆၂ မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ယင်း"မူ"အပေါ် တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးချက်များမှတ်တမ်း" မာတိကာ_ ထုတ်ဝေသူ၏နိဒါန်း...အပိုင်း (၁) :ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှတင်သွင်းသောပြည်​ထောင်စုစစ်စစ်မူ အခန်း (၁) ၁၉၆၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြု့ပြည်လမ်းအသံလွှင့်ရုံ ခန်းမဆောင်တွင် ကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ် အခန်း (၂) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု၏အဖွင့်မိန့်ခွန်း အခန်း (၃) ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေး အဖွဲ့မှတင်သွင်းသော "ပြည် ထောင်စုစစ်စစ်မူ" ကို ရှမ်းပြည်နယ်ဥက္ကဌ စဝ်ခွန်ချိုမှ တင်သွင်းခြင်း အခန်း (၄) ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဒူဝါ​ဇော်လွန်း၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက် အခန်း (၅) ချင်းအထူးဝ ဒေသတိုင်းကိုယ်စားလှယ် ကပ္ပတိန်မန်းတုံနုံး၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက် အခန်း (၆) ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)၏ ဆွေးနွေးတင်ပြချက် အခန်း (၇) ကယားပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက်... အပိုင်း (၂) ပြည်နယ်များညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော "ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ" အပေါ် ဗမာနိုင်ငံရေးပါတီများ၏ တုန့်ပြန်ချက်များ အခန်း (၈) ၁၉၆၂ မတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသောဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်နှင့် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏အဖွင့်အမှာစကား အခန်း (၉) ပမညတဥက္ကဌ သခင်ချစ်မောင်၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက် အခန်း (၁ဝ) ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဗဆွေ၏ဆွေးနွေးတင်ပြချက်
Author/creator: ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မှုန်း ဆာခေါင်း နှင့်စိုင်းမော (န်) (Collection)
Title: တတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ မှတ်တမ်းများ
Description/subject: ENC "PEACEFUL CO-EXISTENCE: Towards Federal Union of Burma [Series No.8]" အခန်း (၁) ENSCC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုများ။ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များ၏တတိယအကြိမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခန်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သောမိန့်ခွန်းများ၊ ၁:၁၊ အလှည့်ကျသဘာပတိဗိုလ်ချုပ်မန်းအောင်သန်းလေး.အဖွင့်မိန့်ခွန်း ၁:၂၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (NDF) ဒု-ဥက္ကဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်၏မိန့်ခွန်း ၁:၃၊UNLD (LA) ဥက္ကဌ ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန်း၏မိန့်ခွန်း ၁:၄၊ (KNPP) ဥက့ဌ ခူထဲဘူးဖဲ့.မိန်ဏခွန်း ၁:၅၊ SDU မှ ဒေါက်တာစဝ်ဇန့်ယောင်ဟွေ.မိန့်ခွန်း ၁:၆၊RCCS ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးစိုင်းပွန်ခေး၏မိန့်ခွန်း..... အခန်း (၂)ENSCC ၏(၂) နှစ်တာလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများကိုတင်သွင်းခြင်း: ၂:၁၊ အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်း တင်သွင်းသော ENSCC၏နှစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ ၂:၂၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာ မှ ENSCC နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ ((Road Map for Rebuilding the Union of Burma) ၏အစီရင်ခံစာ ၂:၃၊ နိုင်ငံတကာရေးရာတာဝန်ခံ ခွန်းဒက်ဒီဘူရီတင်သွင်းသော ENSCC ၏နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ ..... အခန်း (၃) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တပ်ပေါင်းစုများမှတင်သွင်းသော "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ကျစ်လစ်ခိုင်မာသော စည်းလုံးညီညွတ်ရေး" (Solidarity) တည်ဆောက်မှုအတွက် အမြင်နှင့်သဘောထား စာတမ်းများ ၃:၁၊UNLD (LA) မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၂၊ALP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၃၊ CNF မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၄၊ KNPP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၅၊ KNU မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၆၊MPP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၇၊ NMSP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၃:၈၊ PSLF မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ..... အခန်း (၄) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ "သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဦ" (Tripartite Dialogue) အပေါ် အမြင်နှင့်သဘောထားစာတမ်းများ ၄:၁၊ UNLD (LA) မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၂၊ ALP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၃၊ CNFမှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၄၊ KNPP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၅၊ MPP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၆၊NMSP မှတင်သွင်းသောစာတမ်း ၄:၇၊ NDF အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှ သုံးသပ်တင်ပြချက် ၄:၈၊ UNLD(LA) နာယကDr. Chao Tzang Yawnghwe မှ Dialogue အပေါ်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... အခန်း (၅) လက်ရှိနိုင်ငံရေးအပေါ် သုံးသပ်ချက်များ (KNU နှင့် KNPPတို့၏အခြေအနေ) ၅:၁၊ အလှည့်ကျသဘာပတိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာမလာဘော၏မိန့်ခွန်း ၅:၂၊ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုမန်းရှာမှ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို တင်ပြရှင်းလင်းခြင်း ၅:၃၊ KNPP ဒု-ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မန်းအောင်သန်းလေး၏လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို တင်ပြရှင်းလင်းခြင်း ၅:၄၊ KNPP တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ခူဦးရယ်မှ ကရင်နီပြည်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေတင်ပြချက် ၅:၅၊ ENSCC အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုန်း၏ကြားဖြတ်မေတ္တာရပ်ခံချက် ၅:၆၊KNU ဒု-ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ၏KNU နှင့် နအဖစစ်အစိုးရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ် ရှင်းလင်းတင်ပြချက် ..... အခန်း (၆) နိုင်ငံတကာအခြေအနေကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း ၆:၁၊ အလှည့်ကျသဘာပတိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘိုမြ၏အဖွင့်မိန့်ခွန်း ၆:၂၊ ENSCC အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Harn Yawnghwe မှ Inernational Forum နှင့် Bangkok Process အပေါ် ဆွေးနွေးခြင်း ၆:၃၊ ENSCC နိုင်ငံခြားရေးရာတာဝန်ခံ Teddy Buri မှ Bangkok Process အပေါ် ဆွေးနွေးခြင်း..... အခန်း (၇) ၇:၁၊ တတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်များ ၇:၂၊ တတိယအ’ကိမ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ..... အခန်း (၈) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ (ENC) ၈:၁၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ၏ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ၈:၂၊ ENC ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ
Description/subject: အပိုင်း(၁)ညီလာခံဖွင့်လှစ်ခြင်း။ ။ သဘာပတိအဖွင့်မိန့်ခွန်း,နာယကအဖွဲ့၀င် စဝ်ဆိုင်စစ်မိတ်ဆက်စကား, တက်ရောက်လာကြသော အဖွဲ့ချုပ်၏အဖွဲ့ဝင်အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားခြင်း အပိုင်း(၂)ညီလာခံသို့တင်သွင်းသောစာတမ်းများ 2:1 UNLD (LA) Policy Making & External Affairs Committee's Report 2:2 Ethnic Nationalities Initiative for Tripartite Dialogue: Part (1): Report on Activities of ENSCC Part (2): ENSCC Policy Paper Part (3): Statement & Declarations 2:3 Report on State Constitutions Drafting Process 2:4 UNLD (LA) Organizing & Alliance Affairs Committee's Report အပိုင်း(၃)ညီလာခံသို့တင်သွင်းသောစာတမ်းများအပေါ် ပြန်လည်ဆွေးနွေးဝေဖန်သုံး သပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း ၃:၁ UNLD(LA) Policy Making and External Affairs Committee's Report အပေါ်ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်း (ဆလိုင်းလျန်မှုန်း) ၃:၂ ပြည်နယ်များဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ဆွေးနွေးခြင်း (ဆလိုင်းလျန်မှုန်း) ၃:၃ စည်းရုံးရေးနှင့်မဟာမိတ်ရေးရာလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာအပေါ် ဆွေးနွေးခြင်း (ခွန်းမန်းကိုဘန်း) ၃:၄ ယနေ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုသုံးသပ်ချက်စာတမ်း တင်သွင်းခြင်း(မန်းညွန့်မောင်) ၃:၅ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုဆွေးနွေးခြင်း(စဝ်ဆိုင်စစ်)
Author/creator: ဆလိုင်းလျန်မှုန်း ဆာခေါင်း၊ စိုင်းမောန်၊ခွန်းမန်းကိုဘန်း၊ မန်းညွန့်မောင်၊ စဝ်ဆိုင်စစ်
Description/subject: Part One: Burmese Section:ပြည်နယ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သတ်သောအစီရင်ခံစာ (ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်း) Part Two: English Section 1.Introduction:(i)Foreword (Chao-Tzang Yawnghwe)(ii)Report on State Constitutions Drafting Process(Lian H. Sakhong) 2.Federalism, State Constitutions and Self-Determination:(i)Federalism, State Constitutions and Ethnic Self-Determination (Chao-Tzang Yawnghwe)(ii)Burma:State Constitutions and the Challenges Facing the Ethnic Nationalities (Chao-Tzang Yawnghwe) 3.The Role of State Constitutions in the Protection of Nationality and Monitority Rights:Lessons From Other Countries (i)Australian Federalism, State Constitutions and the Protection of minority Rights (Cheryl Saunders)(ii)Federalism, Diversity and Minority Rights: What can we learn from India (Yogendra Yadav) (iii)Nigeria'sExperience in Managing the Challenges of Ethnic and Religious Diversity through Constitutional Provisions (Otive Igbuzor) 4.American Model Of State Constitutions:(i)Model State Constitution 5.German Model Of Local Governments: (i)Federalism and Local Self-Governmennt in Germany (Harald Hofmann)
Description/subject: "ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ပထမအကြိမ်ညီလာခံမှတ်တမ်း" Foreward by: Dr. Chao Tzang Yawnghwe ၁။ပထမအကြိမ် ညီလာခံ (က)ပမာဏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြန် လည်ဖွဲ့စည်း ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက် / Announcement 1/98 [Formation of UNLD (LA)] (ခ)ညီလာခံအကြို ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များ/ Announcement for Holding of UNLD Inaugural Congress (ဂ)ဖိတ်ကြားခြင်း/ Invitation for UNLD Inaugural Congress (ဃ) ညီလာခံအစီအစဉ်များ/ Tentavive Agenda ၂။ညီလာခံတွင်တင်သွင်းဆွေးနွေးသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာတမ်းများ (က)"DEMOCRACY MOVEMENT TOWARDS FEDERAL UNION: THE ROLE OF UNLD IN THE STRUGGLE FOR DEMOCRACY AND FEDERALISM IN BURMA" By: Dr. Lian H. Sakhong (ခ) "BASICS PRINCIPLES ON STATE CONSTITUTION" By: Dr. Chao Tzang Yawnghwe (ဂ) "BASICS PRINCIPLES OF POLITICAL DIALOGUE" By: Harn Yawnghwe ၃။ညီလာခံတွင်တင်သွင်းဆွေးနွေးသော မြန်မာဘာသာစာတမ်းများ (က)ခွန်မာရ်ကိုဘန်း၏“တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ နိုင်ငံရေးသမိုင်းဖြစ်စဉ်အကျဉ်းနှင့်ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဆယ်နှစ်တာဖြတ်သန်းမှုသုံးသပ်ချက်” (ခ)မန်းညွန့်မောင်၏“နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမြန်မာစစ်ကောင်စီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်နှင့်မဟာဗျူဟာ ဆိုင်ရာပေါ်လေ့လာသုံးသပ်ချက်”(ဂ)အယ်နီရယ်အောင်၏ “နဝတ/နအဖ အမျိုးသားညီလာခံအတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းချက်” (ဃ) စိုင်းဝင်းဖေ၏ “ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများအတွင်း နိုင်ငံရေးအရခိုင်မာတိုးတက်ရေး (င)စဝ်အွတ်ကေးဆီး၏“မဟာမိတ်ရေးရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း” ၄။ပထမအကြိမ်ညီလာခံထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ။ပထမအကြိမ် ညီလာခံထုတ်ပြန် ကြေညာချက်/Statement of the Inaugural Meeting of UNLD (LA) ၅။ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏ (က)မူဝါဒသဘောထား၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ / UNLD (LA)'s Aims and Objectives (ခ)နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလမ်းညွှန်အခြေခံမူ(၇)ချက် /The Basic Principles of Federal Union (ဂ)အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း (ယာယီ/မူကြမ်း) (ဃ)ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ/(Recorded Photos)
Author/creator: Dr. Chao Tzang Yawnghwe, Harn Yawnghwe ,Dr. Lian H. Sakhong,ခွန်မာရ်ကိုဘန်း,မန်းညွန့်မောင်,အယ်နီရယ်အောင်၊စိုင်းဝင်းဖေ၊
Description/subject: "ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်တန်းတူရေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများ" ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးဝန်ဦကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်၀င်း၏အမှာစာ...FOWARD By Dr. Chao-Tzang Yawnghwe (Advisor-Consultant, National Reconciliation Program)...ထုတ်ဝေသူထံမှ အမှာစာ... အခန်း(၁) ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူမျိုးစုပြဿနာ (ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကာလလှုပ်ရှားမှုများ... အခန်း(၂) ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏လှုပ်ရှားမှုများ (အကျဉ်းချုပ်) ... အခန်း(၃) ခွဲထွက်ရေးနှင့်တန်းတူရေးပြဿနာ... အခန်း(၄) လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲ... အခန်း(၅) ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများညီလာခံမှဆုံးဖြတ်ချက်)... အခန်း(၆) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းမဖက်သောနည်းဖြင့်ပြန်လည်ရယူရေးလမ်းစဉ်)... အခန်း(၇) အာဏာလွှဲပြောင်းရေးပြဿနာ (ဒုတိယအကြိမ်တိုင်းရင်းသားညီလာခံမှတောင်းဆိုချက်များ)... အခန်း(၈)ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းကြေညာချက်... အခန်း(၉)စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆီသို့